Maxkmadda ciidamada qalabka sida qeybta 27aad ee XDS oo xukun ku riday askari horay u dilay askari kale. – Radio Muqdisho
Maxkmadda ciidamada qalabka sida qeybta 27aad ee XDS oo xukun ku riday askari horay u dilay askari kale.
Maxkamadda darajada 1-aad ee ciidamada qalabka sida qeybta 27-aad ee XDS oo maanta dhageysatey Dacwad Ciqaabeed loo heystay eedeysane D/Le Xoogga , C/waaxid Axmed faarax oo horay dil uga geystay Allaha u Naxariistee , Sadax xarigle XDS , Maxamuud Saciid Nuur oo karissanaa ilaalada Taliyaha qeybta 21-aad.
Maxkamada oo dhageysatey baarista xafiiska xeer ilaalinta iyo qiraalka eedeysanaha sidoo kalena dhageysatey, marqaatiyaasha ku sugnaa Goobta falku ka dhacey ayaa Dambiile C/Waaxid Ahmed Faarax ku xukuntay Dil toogasho ah, oo noqonaya qisaasta Marxuum sadax xarigle XDS, Maxamuud Saciid Nuur.
Dambiile C/Waaxid Ahmed Faarax ayaa falkaan dilka ah geystay 3-dii bishaan December,waxa uuna falkani ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug.
Guddiga joogtada ah ee golaha shacabka BFS iyo guddiga dhab u-heshiisiinta dowladda dhexe iyo Soomaaliland oo kulmay